Kedụ ka ndị Reed Diffusers si arụ ọrụ-N'ogbe Essentile Mmanụ diffuser | AromaEasy
Kedu ka Reed Diffusers si arụ ọrụ
Ihe na February 28, 2020 Nwere ike 30, 2020 by Aromaeasy
Kedu ihe bụ reed diffusers?
N'ụdị, ahịhịa bụ ite ma ọ bụ karama mmanụ dị mkpa nke nwere ọtụtụ ahịhịa amị n’ime.
N'adịghị ka kandụl, ndị na-enye mmanụ na mmanụ dị mkpa adịghị ekpo ọkụ. N'ihi ya, ahịhịa na-esighi ike. Ire ọkụ anaghị anyụ anyụ. Ha na-agbasasị isi ahụ n'ime ikuku n'ụzọ nkịtị.
N'adịghị Ihe mgbasa ultrasonic ma ọ bụ nebulizer, ahịhịa na-amị amị adịghị mkpa ka ọkụ eletrik rụọ ọrụ.
Njirimara ndị a na-eme ka ahịhịa na-eme ka ọ bụrụ ụzọ kachasị esi ísì ọma n'ọnọdụ ụfọdụ akọwapụtara dị ka ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ụlọ ịsa ahụ.
N’ịdị mfe iji, ahịhịa amị amị amị bụ ewu n’ụlọ n’ ugbu a.
Nọgide na-agụ iji chọpụta otu ha si arụ ọrụ.
Kedu ka ndị na-agbanwe ahịhịa na-esi arụ ọrụ?
N’ozuzu, a na-eme ahịhịa amị maka ịrụ ọrụ ka ukwuu na-agbasasị ebe ọ bụ na a na-agbasa mmanụ dị mkpa n'ogologo ahịhịa niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere usoro na-enye ọrịre nke na-ewepụta ntọhapụ nke isi na-esi ísì ụtọ. Osisi diffuser ọ bụla nwere ihe karịrị iri abụọ na ngalaba kewapụrụ na - agba site n’elu ruo na ala nke ahịhịa amị dị ka 20+.
Ha emeghewo kpamkpam ịdọrọ mmiri mmiri site na ala ruo na elu. N'ịrụ ọrụ dị mma, mkpara ndị a na-adọwa nkụ na-ete mmanụ ndị dị mkpa n’ime karama ahụ, na-eburu ya n’elu elu okporo ahịhịa amị, ma na-ahapụ nsị ahụ na-ekpo ọkụ n’ikuku.
N'okwu, ahịhịa amị na-esi isi ísì ọma ma na-ewepụta ísì ụtọ gburugburu ụlọ gị - dịka ọ dị.
Etu ị ga-esi edobe ahịhịa na ahịhịa
N'ọnọdụ ụfọdụ, mmanụ ndị dị mkpa ejiriworị dochie ihe ndị na-enye ihe nrụpụta. Ọ bụrụ na ọ bụ nke gị, kpochapụ stopa ahụ wee tinye ahịhịa amị ahụ.
Ọ bụrụ n’ogwo mmanụ ahụ n’ime karama dị iche, tinye mmanụ dị mkpa n’ite ahụ ma fanye ahịhịa amị ahụ. Kachasị Ibu bụ ¾ nke arịa. Debe mmanụ fọdụrụ n'ime karama ahụ n'ime kọmị dị jụụ. Mmanụ ahụ ga-adịgide karịa n'ime akpa ejiri aka mechie.
Mgbe achọrọ, mejupụta ihe mgbasa arịa nwere mmanụ dị mkpa iji mee ka isi ahụ.
Mee ka anya gi ghee oghe ozo mgbe ị na-etinye mkpirisi ahihia. Dịka ụfọdụ, ogo mmanụ dị mkpa nwere ike bulite oke iji tufuo elu arịa ahụ. Echiche dị mma ịtọtọ onye na-ahụ maka ịsa mmiri bụ ime nke ahụ n’elu ọzọ ma hichaa mmanụ ọ bụla na - ebupụ n’arụ ahụ tupu ị tụnye ya n’ọnọdụ siri ike. Ọ ka mma nchekwa karịa ndo, dịka mgbe niile.
Ọ dị mma ma ọ bụrụ na i jiri arịa ị nwetara n’ụlọ gị were ahịhịa amị mee ka ọ dị mma. Onye na-agba ahịhịa amị ga-arụ ọrụ nke ọma na obere akpa ọ bụla nwere oghere dị warara (dị ka obere karama ketchup). Settọ mmanụ nkesa mmanụ dị mkpa site na isoro ntuziaka ekwuputara n’elu ma ị dị mma ịga.
Ndụmọdụ gbasara otu esi ejikwa reed diffuser
Debe onye na –eme nkesa gị n’ebe dị elu okporo ụzọ ebe isi na - eme ka ikuku na - ekesa ikuku n'ime ụlọ ahụ. Ebe ọzọ a na-atụ aro ya bụ n'ime ụlọ dị nso n'ọnụ ụzọ ka ị nwee ike ijide isi ahụ ma ọ bụrụhaala na ị banye n'ime ụlọ ahụ. N’ikwu ya, were ahịhịa dị mma ka ọ bụrụ okoko osisi nke nwere ifuru - dị ka sistemụ ha si yie.
Site na usoro ntọala a ị ga-esi isi ísì mgbe ị na-aga ije, n'agbanyeghị na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ gaghị ejupụta ụlọ ahụ dum na-esi isi.
Kpoo ahịhịa ndị na-esi ísì ụtọ karịa. Nwere ike tụgharịa ahịhịa ole na ole otu izu ma ọ bụ ahịhịa niile kwa ụbọchị, dabere na mkpa gị. Dị mara na ka ahịhịa na-atụgharị karịa ka ọ na-adọkwu ọsọ ọsọ, mmanụ ga-agbaze mmiri ga-agbaze ngwa ngwa.
Kpachara anya mgbe ị na-atụgharị ahịhịa. Fụchaa ahịhịa ndị ahụ n’elu ebe a na-asa ahụ ma hichaa arịa ọ bụla na-esi mmanụ ọsụsọ tupu i tinye ya n’elu tebụl gị siri ike.
Debe efere n’etiti onye na-ere ya ka ihe ọ bụla ghara ịdị mkpa iji gbochie blanket gị dị oke ọnụ
Kpoo ụfọdụ ahịhịa dị iche iche tupu gị agawa ọrụ. N’ụlọ gị, ísì ụtọ gị ga-anabata gị.
Họrọ ahịhịa amị amị ga-adị n'ime ụlọ gị. Mkpịsị ugodi mmanụ dị mkpa na-arụ ọrụ dị ka okooko osisi - nke buru ibu ma ọ bụrụ na ahịhịa amịkwu, ma na-esi ísì ụtọ ka ukwuu, yabụ, ihe ndị a ga-arụ ọrụ nke ọma na mbara sara mbara.
O buru na I choro ime ka ejuputa nfe gi, kpochapu ya na mmiri ma suye ya ma kpochaa ya kpamkpam tupu i ghajupu ya.
Mgbe ị gbanwere mmanụ, ị ga - achọkwa dochie ahịhịa. Ahịhịa amịkọrọ uzuzu ma kpuchie ya karịa ka oge na-aga ma na-efesa arụmọrụ ya dịgasị iche. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ahịhịa niile bụ otu, ọ ka mma ịrapara na ahịhịa amị nke otu ika mgbe ị gbanwere mmanụ dị mkpa.
Amị dịgasị iche iche ogologo. Jiri ogologo oge kachasị mma n'anya gị. Don'tchọghị ka oge ha dị arọ ma ọ bụrụ na ha nwere ike merie. (Dịka ọmụma, ejikwala ahịhịa 15 ″ dị elu n'ihe dị ogologo 3).) N'ozuzu, AromaEasy na-ahọrọ ka amịchasị ahụ dị na karama karịa ihe ha ruru n'ịdị elu karama ahụ.
Enwere m ike ijiju mmanụ ndị dị oke mkpa were mmanụ kwụọ ahịhịa juru ma jiri otu ụdị ya?
Ngwa ngwa ejiri mmanụ were rụọ ọrụ, ịnwere ike iji ya jupụta mmanụ mmanụ ahịhịa juru. Ugwu a mịnyere n’ime ahịhịa amị gị ga-agwakọta onye ọhụrụ ma nwee ike iwepụta mkpo isi na-adịghị mma, yabụ anyị anaghị atụ aro ime ya.
Ezigbo ahịhịa m na-eme adịghị mma ka ọ na-adịbu n'agbanyeghị na mmanụ dị ọtụtụ n'ime ite ahụ. Kedu ihe m nwere ike ịme?
Nwere ike nwaa ịfe nhịhịa, mkpụgharị a dị mfe nwere ike inye aka bulite ụdị mgbasa dị mma. Dịka m kwuru na mbụ, buru n’uche na mgbe ị na-atụnyekarị ahịhịa gị ọsọ ọsọ ka mmanụ ga-agbasasị. Wayzọ ọzọ eji atụgharị ahịhịa bụ inye karama ahụ otu “swirl” ma ọ bụ abụọ. Nke a nwekwara ike inye aka mee ka isi ahụ sie ike.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, ahịhịa amịkọrọ uzuzu ma kpuchie ya karịa ka oge na-aga ma na-efukwa arụmọrụ ya dịgasị iche. Ọ bụrụ na ọtụtụ mmanụ ka fọdụ ma tụpụ ahịhịa amịghị enyere ahịhịa na-eto gị aka rụọ ọrụ nke ọma, tụgharịa dochie ahịhịa gị. N’ezie, ị nwere ike dochie ahịhịa mgbe ụfọdụ ka ịdị na-arụ ọrụ dị iche iche. Anyị ga-akwado ime nke a mgbe 100ml mmanụ dị mkpa mecharachara, oge amamihe nke kwesịrị ịdị ihe dịka ọnwa 4.
Ogologo oge ole ka ihe nsị ahịhịa m na-ewe?
Enwere ọtụtụ ihe na-enyere aka ogologo oge mmanụ ga-adịgide. Oke ihu igwe, okpomoku ulo, imechi emechi, uzo mepere emepe, iru mmiri, wdg. Ma, n’ozuzu na ichikota, 100ml diffuser oil ga adi ogologo onwa ano.
There nwere ọdịiche dị n’etiti mmanụ ahịhịa na-enye ihe na mmanụ dị ezigbo mkpa?
Ee, mmanụ dị mkpa maka ndị na - eke ahịhịa amị dịcha iche iche ọcha mkpa mmanụ. F jiri mmanụ na-eme ka mmiri sie ike dị nnọọ iche karịa iji mmanụ ọkụ ma ọ bụ maa jijiji na-eme ka mmanụ dị mkpa dị. Ewepụtara site na ahịhịa na ahịhịa, ụfọdụ mmanụ dị mkpa dị oke mkpa nwere nnukwu viscosity, nke na-adabaghị maka ịgbasa oyi. Iji mee ka ahịhịa amị mmanụ na mmanụ ndị a dị mkpa na-arụ ọrụ nke ọma, ahịhịa amịgharị na-eme ka ndị na-ebubata ya ihe na-etinye ihe ndị ọzọ na-agbakwunye. Ebe obu na aromatherapy choro mmanu di nkpa na ego zuru oke ma di ocha. Reed diffuser, nwere ikwu, enweghị uru dị ukwuu banyere ịromụ ọgwụ.
Osisi na Mkpa Dị Mkpa
Gịnị Bụ Ihe Na-akpata Nsogbu Ahụ